Star Convention Center any Thailand eo ambany fitantanana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Star Convention Center any Thailand eo ambany fitantanana vaovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Fandefasana gazety • Vaovao Mafana Thailand • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
accor dia manambara ny fitantanana ny ivontoerana fivorian'ny kintana
Ny Star Convention Hotel dia haverina ao amin'ny Novotel Rayong Star Convention Center amin'ny taona 2020. Any afovoan-tanànan'ny faritanin'i Rayong, ny hotely dia hanamboatra fanavaozana lehibe ny faritry ny besinimaro, ny toeram-pisakafoana ary ny efitrano fandraisam-bahiny 235 amin'ny dingana voalohany ary 336 hafa koa efitrano fandraisam-bahiny amin'ny dingana faharoa mandritra ny roa taona.
Accor dia nanao sonia fifanarahana hitantana ny Star Convention Center misy efitrano 571 ao Thailand.
“Faly be izahay fa hiditra ao amin'ny tamba-jotra Accor ny Star Convention Hotel ary hampitombo ny portfolio misy anay amin'ny tanàna toa an'i Rayong. Mino izahay fa ny Seaboard Atsinanana, ao anatin'izany ireo faritany toa an'i Rayong, Chonburi, Trat, miaraka amin'ny làlamby haingam-pandeha haingam-pandeha ho avy dia hanome fotoana fampandrosoana tsara amin'ny ho avy. Vahiny afaka manantena ny famolavolana voajanahary sy mahavariana ny marika Novotel ary hiala sasatra amin'ny toerana mampionona sy manome hery ”, hoy i Patrick Basset, Chief of Officer of Accor ho an'ny Azia atsimo atsinanana sy avaratra atsinanana ary ny Maldives.
Ny hotely dia miorina amin'ny ivon'ny iray amin'ireo faritany lehibe amin'ny fambolena sy ny indostria any Thailand. Toerana itodiana amoron-dranomasina malaza ho an'ny mponina koa ny hotely, eo ho eo amin'ny 2.5 ora miala eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Suvarnabhumi ary 1 ora amin'ny fiara-manidina U-Tapao International Airport.
“Faly izahay nanatevin-daharana an'i Accor ary mino izahay fa ny fahaizan'ilay vondrona sy ny fahaizany mandray vahiny dia hanampy amin'ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny. Ny fanaovan-tsonia ny fiaraha-miasa aminay miaraka amin'ny Accor dia hita taratra ihany koa ny fahatokisantsika ny indostrian'ny fizahantany any Rayong sy ny Politikan'ny East Economic Corridor (EEC). Manantena ny hiara-hiasa amin'ny ekipa Accor izahay hanangana toko vaovao amin'ny lova navelan'ny Star Convention Hotel, ” hoy i Phisamai Supanuntaroek, talen'ny Star Convention Hotel.